जगदिशपुर तालमा डुङ्गा सञ्चालन ! | Mechikali Daily
जगदिशपुर तालमा डुङ्गा सञ्चालन !
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: २५ पुष २०७५, बुधबार ०१:२८
प्रदेश ५ को मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा रहेको कपिलवस्तुको जगदिशपुर तालमा डुङ्गामा रमाउँदै आन्तरिक पर्यटकहरु ।
बुटवल, पुस । चराको राजधानीका रुपमा चिनिएको नेपालकै ठूलो मानव निर्मित ताल जगदिशपुर तालमा पर्यटकीय प्रवद्र्धन तथा तालको प्रचारप्रसारको मुख्य उद्धेश्यका साथ डुङ्गा सञ्चालन गरिएको नम्बर ९ का वडाध्यक्ष शिवबहादुर वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।
जगदिशपुर जलाशय बहुसरोकार मञ्च र कपिलवस्तु नगरपालिकाले संयुक्त रुपमा तालमा ६ वटा डुङ्गा सञ्चालन गरिएको छ । ताल एक सय ५७ हेक्टरमा फैलिएको छ । यो ताल सन् २००३ मा रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत भएको ताल हो । तालको चारै तिर अवलोकनका लागि भ्यू टावर निर्माण गरिएको छ ।
तालका विभिन्न स्थानमा अवलोकन र थकान मार्नका लागि छहारी घरहरु निर्माणसमेत गरिएका छन् । तालमा अहिले देशकै धैरै तीन हजार पाँच सय बढी चरा आइसकेको वरिष्ठ चराविद्हरुको भनाइ छ । यो तालमा सबैभन्दा बढी मरुल चरा आएका छन् । त्यस्तै खडखडे, सिलसिले हाँस, कालीजरे हाँस र मालक हाँस आएका छन् । यी चराको संख्या ३ सयदेखि ५ सयसम्म रहेको छ । सुईरोपुच्छ«े चरा, बेल्चाठुडे हाँस, सिन्दुरे हाँस र कैलो टाउके हाँस पनि आएका छन् । यी चरा पनि ५ सयको संख्यामा रहेका छन् ।
विश्वमै दुर्लभ हरि हाँस तालमा प्रसस्त देखिएका छन् । उक्त चरा पश्चिमको घोडाघोडी तालपछि सबैभन्दा धेरै २ सय ५० को संख्यामा यहाँ देखिएको चराविद् डा.हेमसागर बरालले बताउनुभयो । साइबेरिया, रुस, चीन, मंगोलिया, मध्य एशियाका तुर्केमिनिस्तान र किर्गिस्तानलगायतका देशबाट यहाँ चराहरु आउने गर्छन् । जगदिशपुर तालमा एक सय १८ बढी प्रजातिको चराचुरुङ्गी पाइने पंक्षी संरक्षण संघले जनाएको छ । तालमा डुङ्गा सञ्चालन गर्दा चराहरुमा असर परे नपरेको यकिन गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।